Ogaden News Agency (ONA) – Ururka ANDM oo Saraakiil Kamid Ahaa Caydhiyay + Sababta.
Ururka ANDM oo Saraakiil Kamid Ahaa Caydhiyay + Sababta.
Wararka naga soo gaadhaya Itoobiya gaar ahaan Gobolka Axmaarada ayaa sheegay in ururka talada Gobolka Axmaarada haya ee ANDM uu xubinimadii urarka kasaaray Bereket Simon iyo Taddese Kassaber, oo ahaa saraakiil lasoo shaqeeyay ururkii macangaga ahaa ee TPLF.
Labadan masuul ayaa ka tisrsanaa Gudiga Fulinta iyo Golaha Dhexe ee ANDM waxaana lasheegay in ay yihiin xubno aan isbadalka wadanka kasocda la jaan qaadi karin oo macangag ah aaminsana aragtidii ururkii dhiig miiratada ahaa ee TPLF waxaana lagu eedeeyay in ay xidhiid la leeyahiin saraakiisha qaswadayaasha ah ee Tigrey ee Maqale isku uruursaday.
Ugu danbayna ururka ayaa sheegay in ay labadan siyaasi shirkad TIRET ladhaho ay si khaldan u adeegsadeen baadhitaan qotodheerna lagu samayn doono. Guud ahaanba Gobolada Itoobiya waxaa kasocda ol-ole xididaha loogu siibayo hadhaagii TPLF ee gabalkiisu dhacay.